राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीतिको तयारी सुरु : के के हुँदैछन् व्यवस्था ? ~ Banking Khabar
राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीतिको तयारी सुरु : के के हुँदैछन् व्यवस्था ?
बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो चरणको रुपमा रहेको सुझाव संकलन आह्वान गरेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माणको थालनी गरेको हाे।
सुझाव संकलन अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, लघुवित्त वित्तीय संस्था संघ लगायतका क्षेत्रगत संघहरुसँग रायसुझाव माग्ने गरेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीको तरलता र व्याजदर स्थिरतामा केन्द्रित
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पनि बैंकिङ प्रणालीको तरलता र व्याजदर स्थिरतामा केन्द्रित हुने बताउनुहुन्छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिले चालु आर्थिक वर्षमा बैंकिंग प्रणलीमा तरलता सहज अवस्थामा रह्यो जसले गर्दा ब्याजदर समेत निकै तल झरेको अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यो प्रयास गर्ने उहाँले बताउनुभयो । सधैँ यहि अवस्थाको तरलता नरहेपनि केन्द्रीय बैंकले तरलता र ब्याजदरलाई स्थिरता दिन चाहेको गर्भनर अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पनि मुख्य उद्देश्यमा वित्तीय पहुँच बढाउने, वित्तीय समाबेशितालाई बढाउने, विद्युतिय भुक्तानी प्रणलीलाई प्रबर्धन गर्ने, वित्तीय प्रणलीलाई सुरक्षित बनाउने जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर मौद्रिक नीति तयार हुने उहाँको भनाइ छ ।
ग्राहकको संरक्षण र प्रणलीप्रतिको ग्राहकको विश्वास अभिबृद्धि गर्न प्राथामिकता दिने तथा कोभिडको दोस्रो लहरले असर गरेको कारण बजेटले राखेका आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउने मौद्रिक नीति तयार गरिने उहाँको भनाइ छ ।
के होला सेयर धितो कर्जा ?
राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा थप कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ । पछिल्लो समय सेयर बजारप्रति अनुदार देखिँदै एकपछि अर्को गर्दै कडा नीति अबलम्बन गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा थप कडाइ गर्ने तयारी थालेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को मौद्रिक नीतिमार्फत् सेयर धितो कर्जामा जाने रकमलाई थप कडाइ गर्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । नेप्से परिसूचक र कारोबारले उचाईं छुँदै एकपछि अर्को इतिहास रच्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न थालेको हो ।
अहिले सेयर धितो राखेर ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइन्छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामै यसलाई टाएर ६० प्रतिशतमा झार्ने तयारी थियो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जालाई पुनरावलोकन गर्ने जनाएको थियो । सो अनुसार केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितो दिन सक्ने संस्थाको सूचि बनाएको थियो । सूचिकरण भएको १ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने तथा लगातार ३ वर्षदेखि नाफामा रहेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा मार्फत सेयरधितो कर्जामा थप कडाई गरेको थियो ।
१२० दिनको औसत मूल्य र अहिलेको सेयर मूल्यमा जुन कम हुन्छ त्यसको ७० प्रतिशत सेयर धितो कर्जामा ऋण दिने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा मार्फत १२० दिनलाई बढाएर १८० दिन पुर्याएको थियो । यसो गर्दा सेयर धितोमा जाने कर्जा ८ देखि १० प्रतिशतले कमी हुन आउँछ ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई लुवित्त कम्पनीको सेयर किन्न रोक लगाएको थियो । त्यस्तै, दोस्रो बजारमा अल्पकालीन अर्थात् १ वर्षभन्दा कम समयका लागि लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही ठूला खेलाडीले सेयर बजारलाई अस्वाभाविकरुपमा निरन्तर बढाउन थालेपछि कडाइ गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मौद्रिक नीति के हो ?
सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुद्राप्रदाय अर्थात मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ ।
मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने हुँदा मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढी भयो भने महँगी बढ्न जान्छ । उदाहरणको लागि यदि रामसँग आवश्यकताभन्दा बढी सम्पत्ति छ भने उसले आफूले मन परेको कुरा किन्नको लागि जति नै तिर्नुपरे पनि तयार हुन्छ । यसरी सबै धनाढ्यले बढी मूल्य तिरेर सामान किन्दाकिन्दै बजार भाउ नै सोही अनुसार कायम हुन गई स्वतः मूल्यवृद्धि हुन्छ । यस्तो समस्या नआओस् भन्नाका खातिर नेपाल राष्ट्र बैँकले सिमीत मात्रामा मात्रै बजारमा रकम पठाउँछ । यसरी मुद्राप्रदाय नियन्त्रणमा रहँदा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहने र अन्ततः मुद्रास्फिती व्यवस्थापन हुने हुन्छ । यी कुराहरुको नियन्त्रण र नियमन नीतिगत तवरले गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ ।
मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैँकले जारी गर्ने एक मात्र नीति हो, जसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धि नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जन सहितको नीति ल्याउने गर्दछ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ । क वर्गका बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरु हुन् । नेपालमा हाल २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु रहेका छन् । त्यस्तै, ‘ख’ वर्गका बैंकहरु विकास बैंकहरु हुन् । त्यस्तै, ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्था अर्थात फाइनान्स कम्पनीहरु हुन् भने ‘घ’ वर्गका बैंक अर्थात माइक्रोफाइनान्स हुन् । यसरी, ससानादेखि ठूलो पुँजीसम्मको कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ ।